DAAWO:Argagax Ayey Kala Kulmeen Dibka Nibiri Ay u Daawasho Tageen Ma Aaney Fileyn Inuu Ka Caroon Karo oo Naftoodu Ay Khatar Gelin Karto | Baahin Media
DAAWO:Argagax Ayey Kala Kulmeen Dibka Nibiri Ay u Daawasho Tageen Ma Aaney Fileyn Inuu Ka Caroon Karo oo Naftoodu Ay Khatar Gelin Karto
In qofku uu jeclaado Nibiri waa iska arrin dabiici ah, laakiin in loo dhawaado ama lagu ciyaaro naftaada ayaa khatar ku gelin karta, gaar ahaan qofku marka aanuu khabiir ku ahayn oo aanuu garaneyn habka loola dhaqmo.
Safar dalxiis oo nibiriga lagu daawado meel u dhow xeebaha California, ayaa dalxiise reer Ingiriis kula kulmay dhacdo aanuu filan, Tom Mostal iyo saaxiibadii Sharlot ma aaney filayn inuu nibirigu ka caroon doono oo naftoodu ay halis geli karto, waxey galeen khatar badan oo aad u argagax badan.
Waxey dabin ugu dhaceen nibiri caraysan oo miisaankiisu dhan yahay 30 tan waa in u dhiganta 30 maroodi oo qaangaar ah, xajmigiisuna uu ka baaxad weyn yahay labo inataree oo waaweyn, waa sida ay sheegtay jariidada The Sun ee dalka Ingiriiska ka soo baxda.
Dhacdadani markii ay dhacaysay Tom iyo Sharlot waxey saarnaayeen doon yar oo loox ka sameysay oo aan matoor lahayn, waxey la socdeen dalxiisayaal kale oo ku sugnaa gacanka Monterey ee xeebaha California, iyagoo daawanayay nibiri, iyagoo noloshooda caadiga ah iska wata badweynta Pacific-ga.
Si lama filaan ah ayaa waxaa agtooda uga booday nibiri weyn oo dhanka hawada isku tuuray si awood badanna biyaha ugu soo dhacay, dibkiisii ayaa ku dhacay doontii looxa ahayd waxaanuu u tuuray sida dhagaxa yar loo tuuro oo kale.
Tom oo dhacdadan ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay inuu arkay nibiri dhowr ah safarkaa dalxiis, laakiin nibirigan si aad ah ayuu ugu soo dhawaaday, waxey u noqotay waayo aragnimo aanuu weligii illoobi doonin, kadib markii noloshiisu ay khatar gashay.
Waxa uu tilmaamay in markii uu nibirigu booday uu qorraxda ka qariyay, waxa uu sheegay in xilligaa wax baqdin ah aan loo baahneyn ee laga doonayay in si dhakhsiyo ah naftooda ula baxsaan, waa sida ay sameeyeen.
Islamarkii waxaan bilownay inaan ka dheeraanno si aanuu noogu soo dul dhicin, laakiin si lama filaan ah ayey waxwalaaba u madoobaadeen, waxaan is aragnay anagoo biyaha ka hoosaynna, awooddii dibkiisa ee dhirirkeedu ahaa 5-mitir ayaa biyaha ka hoos marisay.
Waxa uu xilligaa dareemayay iney naf is daayeen, waxaan dareemay, ayuu yiri in lugaha iyo gacmaha ay i bakhtiyeen.
Markii uu isagu badbaaday ayaa waxa uu u qaatay in lamaantiisii la sotoay ay dhimatay maadaama uu u qaatay inaaney suurtaggal ahayn in labadooduba ay ka wada badbaadaan khatartaa baaxadda weyn.
Waxaa xusud mudan in gacanka Monterey ee gobolka California ee gudaha dalka Mareykanka lagu tiriyo inuu yahay goob dalxiis oo soo jiidatay dadka jecel iney daawadaan nibiriga.